Ahoana ny fanatsarana ny hery fiarovanao? - Afrikhepri Foundation
Talata 28 septambra 2021
Vakiteny: 22 min
HENOY NY ARTICLE
Lmanana rafitra manan-danja roa ao amin'ny vatana ny rafitra fiarovana.
Voalohany, misy fiatraikany amin'ny vatan'olon-kafa amin'ny alàlan'ny famokarana antibodies ary manentana ireo sela manokana manimba ireo zavamananaina ireo na manimba ny vokatra misy poizina. Izany no fomba hiarovany antsika amin'ireo mpanafika vahiny, dia ny mikraoba, ny viriosy, ny bakteria sy ny sisa. Avy eo izy dia miambina ny sela ao amin'ny vatana mba hahazoana antoka fa tsy voajanahary na mihasimba.
Ny hery fiarovana anananao
Amin'ny lafiny maro, ny rafi-kibo dia rafitra mahavariana indrindra ao amin'ny vatan'ny olona, ​​mora mifaninana amin'ny atidoha, amin'ny fahasarotam-pahefana, ny fifehezana ary ny "fahatsiarovan-tena." Indreto misy ohatra sasantsasany amin'ny zavatra ataon'ilay rafitra fiarovana:
• Ny rafianao fiarovana dia afaka mamantatra ny sela tsirairay ao amin'ny vatana ary manaiky ny tsirairay amin'izy ireo ho namana.
• Amin'ny lafiny hafa, afaka mitoka-monina sy mamantatra ireo mpanafika vahiny, ho bakteria, virosy, holatra na parasy.
• Raha vao fantatra ny mpihaza iray, dia manamboatra fitaovam-piarovana manokana ny rafitra fiarovan-tenanao izay mikendry manokana ny fahalemen'ny mpanohitra.
• Avy eo dia tsara kokoa izany. Rehefa avy nanamboatra fitaovam-piadiana manokana ilay rafitra fiarovana dia manomboka manangana orinasa iray izay mamokatra fitaovam-piadiana ampy ho an'ny mpandroba.
Ny sela tsirairay, na sela mena na fotsy, dia miorina amin'ny tsoka taolana. Ireo sela ireo dia manomboka tsy manavaka ny toetran'ny tsirairay ary lasa sela mena (mpitrandraka oksizenina) na fotsy fotsy (sela ao amin'ny rafitra fiarovana). Indreto misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny sela fotsy (antsoina hoe leukocytes), izay zaraina ho karazana sela efatra:
sela mpiaro ampiasain'ny
Hamafiso ny fiarovana
Isaky ny sela T-cells na ny sela B dia mihetsika noho ny mpihaza iray, ny sasany amin'ireo sela ireo dia lasa efitrano fitadidiana. Raha ny marina, mitambatra izy ireo "fahatsiarovana" ny antigenana manokana mifandray amin'ny mpangalatra mba hahafahan'izy ireo mamaly avy hatrany ny rafi-pandehan'ny hery fiarovana manaraka amin'ny antibiotika manaraka.
Misy karazany maro ny fiantraikan'ny valim-panafahana azo avy amin'ny firaisana. Manana anjara asa ny génétique. Ny olona sasany dia teraka amin'ny rafitra fiarovana mahery kokoa noho ny hafa. Ny sakafo, ny fomba fiainany ary ny tontolo iainana dia mety hanatsara na hanimba ny hery fiarovana. Ankoatr'izay, ny herin'ny valim-boka sy ny faharetan'ny fahatsiarovan-tenan'ny immune dia tena manan-danja tokoa amin'ny karazana antigen voakasik'izany, ary ny habetsary izay nipoitra tamin'ny vatana.
Rehefa teraka isika dia malemy ny hery fiarovantsika; tsy maninona izay tsimatimanota voarainay avy amin'ny renintsika. Saika eo noho eo anefa, amin'ny fiheverana fa mampinono ianao, dia manomboka mihombo io tsimatimanota io. Ny "ronono" voalohany azontsika avy amin'ny renintsika dia, raha ny marina, fa tsy ronono. Izy io dia singa iray antsoina hoe colostrum, ny tena tanjon'izany dia ny fametrahana ny tsimatimanota. Colostrum dia feno fonosana voajanahary voajanahary toy ny lactoferin, alkyglicerols, ary mutation factor. Fanampin'izany, ny fampinonoana dia manampy amin'ny fametrahana kolontsaina probiotika ao amin'ny tsinay, izay manampy amin'ny fananganana hery fiarovan'ny hery fiarovantsika ihany koa.
Ao amin'ny fahendrena ny fitsaboana maoderina, efa namorona vaksiny mba "hanao mialoha ny fahatsiarovana" ho an'ny rafitra vita fanefitra - ny fahatsiarovana ny aretina lehibe mbola tsy nisy toy ny kitrotro, mumps, lefakozatra, difiteria, nendra, sns Ny vaksiny ny malemy ahitana dikan-sterilized zavamiaina bitika dia bitika (na proteinina ireo zavamiaina bitika dia bitika) afaka famokarana ny valin vita fanefitra ao amin'ny vatana tsy niteraka fametrahana tanteraka ny aretina mihitsy. Na vaksiny efa nandray anjara toerana lehibe mba hanampy hampihenana ny isan'ny zaza maty eo, dia tsy ny soa tsy misy vola lany.
• Ny vaksinin'ny polio nomena ny ankizy tao amin'ny 50 sy 60 taona dia tsy nipoitra toy ny niheverana tany am-piandohana. Raha ny marina, taorian'izay, rehefa nampiasaina fitaovana fitsapana tsara kokoa, dia hita fa nisy VIH live ny VIH ao amin'ireo dikanteny voalohany amin'ny vakisiny. Ary inona no nitranga? Eny, azo antoka ny iray, iray amin'ireo viriosy ireo, SV140, dia voakasika mafy amin'ny homamiadan'ny ati-doha.
• Jonas Salk nijoro ho vavolombelona eo anoloan'ny Antenimieran-doholona subcommittee fa hatramin'ny 1961, afa-tsy ho an'ny toe-javatra manan-danja ny sasany avy any amin'ny firenen-kafa, lefakozatra tranga rehetra dia vokatry ny vaksiny Oral lefakozatra.
• Ao amin'ny 1986, ny governemanta federaly dia nametraka fandaharan'asa momba ny famatsiam-bola amin'ny alàlan'ny vakimparitra mba hanonerana ireo tra-boina tamin'ity vakisiny ity. Hatreto, efa ho ny $ 1 arivo tapitrisa no voavela heloka.
• Ankoatra ity ampahany "mavitrika ity amin'ny vakisiny, ny vaksinina dia ahitana zavatra toy ny glycol etylène (antifreeze), formaldehyde (karazany fantatra), ary aliminioma.
Jereo, tsy milaza aho hoe tokony hesorina ny vaksininy, fa ny manavakavaka kely fotsiny no tokony hanavahana antsika ankehitriny. Amin'ny farany, azo heverina fa ny teknika vaovao amin'ny injenieran'ny fototarazo, amin'ny alàlan'ny fanarahana tanteraka ny antigen manafintohina, dia mety hanome endrika vaksinina azo antoka kokoa Fa mandra-pitrangany. Ireo olana mety hitranga amin'ny Rafitra immune
Ny olana mety hitranga dia:
Ny rafitra fiarovan-tena dia tototry ny mpanafika loatra.
Ny hery fanefitra dia mihamalemy ary lasa mora amin'ny fanafihana.
Ny rafitra fiarovan-tena dia manjavona ary tsy mahavaha ny fahafahana mamantatra ny mpihaza na ny sela miavosa.
Ny rafitra fiarovan-tena dia manjavona ary manomboka mandà ny famantarana ny sela ao amin'ny vatana toy ny fahavalo ary manomboka manafika azy ireo.
Ny rafitra fiarovan-tena dia manjavozavo na tsy fahampiana amin'ny fahaterahana.
Amin'ireo olana rehetra ireo, ny efatra voalohany dia, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, azo ampiharina. Fa rehefa teraka tsy manam-pahatapahana ny vondrona misy ny vatana, dia voafetra ihany ny safidy, saingy tsy voatery tsy misy fanantenana.
Amboary ny rafitra fiarovananao
Satria ny tanjon'ny rafitra fiarovana ny vatanao dia ny miaro azy amin'ny fanafihana ary manampy azy hanamboatra ny tenany, ny tsara kokoa azonao, ny salama kokoa aminao. Mba hanamorana io dingana io, dia mila miresaka amin'ny sehatra roa manan-danja amin'ny hery fiarovana izay efa fantatray izahay:
Mila manatsara ny fiasan'ny hery fiarovana amin'ny ankapobeny isika - mba hamela ny vatantsika hiaro azy tsara kokoa.
Mila mikendry singa manokana (mamono / manimba) bakteria, viriosy, micro-organismes ary olona hafa sendra mpaningotra, hanampy ny rafi-pandaminana, araka ny tokony ho izy.
Fantatry ny mpahay siansa nandritra ny taona maro fa azo atao ny manatsara ny asan'ny immune system. Eto Etazonia, ny fomba fanao dia ny mampiasa zava-mahadomelina mahazatra. Ny ankafiziny amin'izao fotoana izao dia ny cytokine dia mifantoka toy ny interleukin sy interferon. Ny ambiny amin'izao tontolo izao, etsy ankilany, dia nanatona akaiky kokoa ny natiora amin'ny fikatsahana ny fampiasana zavaboary voajanahary amin'ny:
• Manatsara sy manatanjaka ny hery fiarovan-tena
• Miady amin'ny aretina
• Manazava ny fahafahan'ny macrophages
• Mampitombo ny famokarana sela T sy ny fiarovana ny cellule T mpanampy
• Ampitao ny asan'ny interferon sy interleukin 1
• Ampio ny valim-panafahan'ny meday
Echinacea dia tena mahagaga ny zava-maitso. Voalohany, dia misy echinacosides (voajanahary antibiotika, penisilinina azo oharina amin 'ny vokany) izay afaka mamono tsara isan-karazany ny virosy, bakteria, ny holatra sy ny prôtôzôera, izay manome io fototra sarobidy ho manasitrana fery ary hitondra ny areti-mifindra. Ny fikarohana ihany koa ny nampiseho ny fahombiazan'ny Echinacea hitsaboana ny sery, traotraoka, ny raboka, ny aretina, sns
Echinacea koa dia mirakitra Echinacea, biochemika izay miaro amin'ny fanafihana ny mikraoba amin'ny alàlan'ny tsy fanavakavahana ny enzyme amin'ny fiterahana, hyaluronidase, vokatry ny mikraoba maro. Ny fianarana toy ilay nivoaka tao amin'ny Infektia sy ny Immunologie dia mampiseho koa fa i Echinacea dia miteraka zavatra izay mampitombo ny fahafahan'ny macrophage ny vatana mba handravana mikraoba. Ary ny fanadihadiana hafa avy amin'ny Oniversiten'i Munich dia naneho fa ny teti-bola Echinacea dia mampitombo ny famokarana T-sela amin'ny 30% mihoatra noho ny zava-mahadomelina ampiasaina amin'ny rafitra fiarovana.
Ny Pau d'arco
Ny Pau d'Arco (Tabebuia heptophylla) dia avy any amin'ireo ala tropikaly any Brezila sy any amin'ny faritra hafa any Amerika Atsimo. Io zavamaniry mahavariana io no mamelona ny rafi-piarovan'ny vatana ary manampy azy hiaro azy amin'ny fiterahana. Efa nampiasaina nandritra ny taonjato maro izy io mba hanatsarana ny hery fiarovana, hanala azy, ary hampihenana ny fanaintainana eo amin'ny vatana, indrindra ho an'ny fatorana. Ny fikarohana dia naneho fa misy antibiotika voajanahary voajanahary izy io, ary misy vokany manasitrana amin'ny vatana manontolo, manadio ny ra ary mamono virosy.
Ny Pau d'Arco ampiasaina hitsaboana ny SIDA, allergie na tsy fahazakana, na aretina sy izay mamaivay, tsy fahampian-dra, asma, vanin-taolana, lalan-drà, mba hanamafisana orina ny rà, hamely traotraoka, isan-karazany homamiadana, Candida tsinaibe, cystitis, emphysema, diabeta, eczema, fistulas, gastritis, ny angatra, hemorrhages, hernias, Hodgkin ny aretina, aty aretina, voan'ny kanseran'ny ra, koditra, sclérose en plaques, osteomyelitis, Parkinson ny aretina, bibikely, prostatitis, psoriasis, rheumatism, kanseran'ny hoditra, fantsika, spleen aretina, bibilava kaikitry, ny fery, ny voan'ny varikose, ny ady ary ny mangana.
Ireo teratany avy amin'ny ala Amazona dia nampiasa ny Suma nandritra ny taona faramparany 300. Na izany aza, talohan'ny 1975 dia nampidirina ny Suma nandritra ny taonjato faha 20 ary notsapaina tany amin'ny Oniversiten'i Sao Paulo, Brezila.
Fianarana ny Dr. Milton Brazzach nanatsoaka hevitra fa tsy misy fanafodiny, dia maivana kokoa be kansera, diabeta, ary ireo izay manana ny tsirony, ary tsy hiharan'ny vokany. Nanomboka teo, fanadihadiana natao tao amin'ny [American University ny Arts manasitrana] "American College of Healing Arts" ny Dr. Michael Tierra, mpanoratra ao amin'ny fomba fambolena anana [Ny anana Trail], maneho fa ny fampiasana Suma tsy tapaka dia afaka manampy hiadiana harerahana (anisan'izany ny fitsaboana ny mitaiza harerahana sy ny tsy fisian'ny angovo fepetra), hisorohana ny sery sy gripa, haingana fanasitranana, mifehy ny ra siramamy, ka hampitombo ny firaisana fiara.
Ny singa mavitrika ao amin'ny Suma dia:
• Asidra Pfaffic, izay manakana ny fihanaky ny aretina isan-karazany.
• Pfaffocides sy ireo saponine hafa, izay manampy amin'ny fijanonana ny aretina mandroso.
• Ny hormonina sitosterol sy stigmasterol ny zavamaniry, izay misakana ny fihanaky ny kolesterol sy ny fihenan'ny ra.
• Alantoin, izay manampy amin'ny fitomboan'ny fahasitranana.
• Ary ny zava-dehibe indrindra: germanium. Ny Suma dia iray amin'ireo taha ambony indrindra amin'ny Ge-132 amin'ireo zavamaniry fantatra.
Inona no tena mahafinaritra momba ny Ge-132? Nahita momba ny 20 taona maro lasa izay nataon'ny mpahay simia japoney, mpikaroka antsoina hoe Kazuhiko Asai. Ny anarana feno dia Carboxyethylgermanium Sesquioxide (na Germanium Sesquioxide, izay fihenam-bidy).
Araka ny fanadihadiana nataon'i Dr. Parris M. Kidd: "fananana ity, noho izany dia maimaim-poana ny vokany lehibe, dia afaka toa feo, rejuvenate, pananahana indray ny asa, afa-jaza miaro manohitra mandritra ny fitondrana vohoka, sitrano may tsy misy maratra, mamarana ny aretina mitaiza, mamerina mijery sy mandre, mampitony ny kanseran'ny kanseran'ny fandrosoana, ary mampihena ny homamiadana mandritra ny herinandro vitsivitsy. Ra aretina, anisan'izany ny aretim-po, angina, aretim-po sy ny fahasimbana peripheral asehonao tsara ny Ge-132, toy ny hépatite sy ny simba anefa, ary ny sasany korontana ny fitondran-tena.
Maro ireo vinaingitra hita ao amin'ny holatra Reishi, Maitake sy Cordyceps dia sokajiana ho mpiaro ny mpiaro (HDP). Ny firaisana amin'ireny volo ireny dia heverina ho fanamafisana ny hery fanefitra amin'ny olombelona, ​​ary koa ny fanampiana amin'ny fifindran'ny nerlandey, ny metabolismy, ny balan'ny hormona, ary ny fitaterana ny sakafo sy oksizenina. Amin'ny alàlan'ny rafi-pandaminana tsy manam-paharoa (T cell), dia manampy ny vatana hifehy ny fampiroboroboana ny sela misy lymphoid sy ny valinteny fiarovan-tena manan-danja hafa.
Reishi: Ny vokatry ny kanserôgôma sy ny voka-dratsin'ny holatra Reishi dia ampifandraisina amin'ny polysaccharides. Ny holatra Reishi dia manana votoaty goavana mucopolysaccharides, izay ny vatany dia miditra ao amin'ny tranon-tsavonan'ny sela ka mahatonga azy ho mafy orina amin'ny virus sy bakteria mikorontana. Toa midika fa ny polysaccharide dia manasitrana macrophages, fotsy fotsy izay "mandany" virosy, bakteria ary olon-kafa.
Maitake: Ahitana ireo holatra avo fitanan'ny iray tsy manam-paharoa polysaccharide iombonana amin'ny antsoina hoe beta glucan 1,6, izay mpikaroka ankehitriny Mino ny ho iray amin'ireo mahery indrindra adaptogenic sy vita fanefitra manaitaitra fantatra. Nisy fanadihadiana fikarohana nivoaka tao amin'ny Chemical fanafody Bulletin (1988) Nasehony fa ny Maitake manana lanjany inhibitive 64% ny kanseran'ny nono sy ny fielezan'ny vay sy sarobidy inhibitive 75% ho an'ny kanseran'ny hoditra sy ny miely patrana. Fanadihadiana momba ny laboratoara any Etazonia National Cancer Institute sy ny Japoney National Institute of Health koa Maitake nampiseho fa mamono ny olombelona nalaina Virus de l'Immunodéficience (VIH) ary manatsara ny asan'ny sela T mpanampy. Ny fikarohana dia naneho fa Maitake dia mandrisika karazana sela miafina sasany ao anatin'izany ny macrophages, sela voajanahary voajanahary, ny sela, ny Tc ary ny Tdh.
Ary tsy vitan'ny hoe mampirisika ny famokarana ireo cellule immune ireo, fa mampitombo ny fahaizan'izy ireo amin'ny fampiroboroboana ny famokarana inteleukin-1, inteleukin-2, ary ny lymphokines. Araka ny efa voalaza tetsy aloha, dia ireo zavatra simika izay ampiarahan'ny vatana amin'ny ankapobeny ny valim-panafahan'ny vatana ary manampy amin'ny fikolokoloana fanafody vahiny. Voamarina fa manana tombony maro i Maitake mba hiady amin'ny homamiadana sy ny tebiteby:
Miaro ny sela salama amin'ny fisorohana azy tsy ho lasa kansera.
Manampy amin'ny fisorohana ny fihanaky ny homamiadana (metastases).
Mitaredretra izany na manakana ny fivoaran'ny tsoka.
Miara-miasa amin'ny fitsaboana simika izy amin'ny fanalefahana ny fiantraikany ratsy. Ny fianarana iray dia mitatitra ny fihenan'ny 90% ny voka-dratsin'ny chemo, anisan'izany ny fahaverezan'ny volo, ny fanaintainana, ary ny tsy fahampian-tsakafo.
Ny Cordyceps dia manana fananana mitovy amin'ny an'ny ginseng ary ampiasaina hanamafy orina sy hanamboarana ny vatana rehefa ritra na aretina maharitra. Ampiasaina amin'ny fomba mahazatra koa ny tsy fahampian-tsakafo, ny neurasthenia, ary ny olana amin'ny voa. Ny fikarohana vao haingana amin'ny cordyceps dia namorona proteinina tena goavana-mavitrika amin'ny tumors, sady manome fiovan'ny immunologique. Ny Cordyceps dia iray amin'ireo holatra malaza indrindra amin'ny fitsaboana Shinoa rehetra, ary koa iray amin'ny lafo indrindra (mitentina $ 249 isaky ny kilao).
Ny Cordyceps dia ampiasaina matetika mba hanatrarana ny olana eo amin'ny bronchiale, ny tsy fahampian-tsakafo, ny rafi-kery tsy fahampian-tsakafo, ary ny fiaretan'ny atleta.
Ny tongolo lay dia iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra ho an'ny bakteria sy virioma. Ny iray amin'ireo endriny maro, allicin, dia antibiotika voajanahary izay toa tsy mamorona ny tendrony bakteria mafy indrindra. Ankoatra izany, dia voan'ny otrikaretina virosy maromaro ny fofona tongolo.
Ny tongolo gasy koa dia afaka manatsara ny asan'ny macrophages izay manainga ny zavamananaina vahiny, toy ny viriosy, bakteria, ary ny diera. Ankoatra izany, ny tongolo lay dia mampitombo ny asan'ny mpanampy T cellule. Ary ny tongolo lay dia tena mahomby amin'ny fitondrana bwonikida vokatry ny viriosy, noho ny toetra mampiavaka ny tsy fahampian'ny hery sy ny fahafahany manala ny volo amin'ny havokavoka. Ary farany, ny tongolo gasy dia mahomby amin'ny streptococcus sy ny bakteria staphylococcus.
(Ny tongolo lay koa ny tongolo lay.) Ny tongolo sy ny tongolo lay dia ahitana solifara maromaro izay mahomby indrindra ho antibody sy antibiotika.
Ny votoatin'ny polysaccharide an'ny Aloe Vera, acemannan, dia manana fiasa lehibe antiviral ary manatsara ny fiarovana. Indrisy anefa, ny habetsaky ny acemannan dia miovaova be avy amin'ny mpamokatra iray hafa. Ny vokatra azo avy amin'ny hetsiky ny acemannan dia nampitombo ny asan'ny lymphocytes amin'ny alloantigens amin'ny fanatsarana ny famotsorana ny monocytes avy amin'ny inteleukin-1. Ankoatra izany, dia voamarika fa manakatra ny haavon'ny macrophage ny acemannan ary misy vokany tsara amin'ny CD-4, CD-8, T-4 ary T-8.
Ny alkyglycerols (fantatra ihany koa eo ambanin'ny anaran'ny alkolxyglycérols na AKG) dia mazava ho novokarin'ny ny vatana sy ny hita ao amin'ny rononon-dreny, aty, tsoka spleen sy taolana. Manana anjara lehibe amin'ny famokarana sy fanentanana ireo sela fotsy izy ireo. Izy ireo koa dia manampy amin'ny fampiharana ny asan'ny taolana taolana. Ny fiantraikan'ny hery mamelona ny AKG dia manampy amin'ny fiarovana ny vatana amin'ny bakteria, fungal sy virioma. Ny loharanon-kery lehibe indrindra amin'ny AKG eto amin'izao tontolo izao dia ny hamandohan'ny solika.
Lactoferin dia iray amin'ireo cytokines izay novokarin'ny vatana. Hita any amin'ny toerana izay tena mahasosotra indrindra ny fanafihana, toy ny ao amin'ny tsinay, maso, sofina, tenda, lakandrano urine, sns. Lactoferin dia naneho fa:
• Manakana ny fampitomboan'ny viriosy, anisan'izany ny SIDA sy ny virosin'ny herpes, amin'ny sela salama;
• Manakana ny fitomboan'ny fivontosana sy ny metastasis;
• Mampidi-doza mivantana amin'ny bakteria sy ny lefona izy io, noho izany manana tombam-bidy tsy manan-tsahala eo amin'ny fisorohana ny fitomboan'ny bakteria sy ny kandidà amin'ny tsinay;
• mampihetsika ny tsy fandriam-pahalemana.
Ny famenoana lactoferrin (na hampiroboroboana ny famokarana ao amin'ny vatana miaraka amin'ny probiotika) dia afaka manandratra ny hery fiarovana sy / na manampy ny vatana amin'ny alalan'ny aretina. Etsy andaniny kosa, ny fitazonana ny tovon-tsakafo amin'ny salama tsara dia ahafahan'ny vatana mamokatra ny lactoferrin manokana.
Glutathione dia molekiola voajanahary amin'ny asidra amine tripeptide hita ao amin'ny sela ao amin'ny vatana. Ankoatra ny antioxidant mahery, ny glutathione dia manohana am-pahibemaso ny asan'ny rafitra immune ary singa manan-danja amin'ny lymphocytes rehetra. Raha ny marina, ny lymphocytes rehetra dia mila ambaratonga glutathione intracellular ho tsara araka ny tokony ho izy. Io molekiola io koa dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana amin'ny voka-dratsin'ny karazan'aretina sy kansineriary. Ao amin'ny olona maro, ny glutathione supplement dia manimba ny vavony. Anisan'ireo alim-bary ireo ny vorona ny cystine glutathione sy glutamyl ary indrindra ny vokatra vary.
Beta 1-3 / -16 Glucan dia fitambarana fambolena voajanahary voajanahary hita voalohany indrindra amin'ny rindrin'ny lefona. Izy io dia miasa amin'ny "fampielezana" macrophages cellules.
Olona maro no mihevitra fa ny rafitra fiarovana dia zavatra mandeha irery. Hadisoana lehibe izany. Alefaso haingana ny Fahasalaman'ny Fandaharan'asa momba ny Fahasalamana ho an'ny fijery iray momba ny fiantraikan'ny rafitra tsirairay amin'ny rafitra manontolo.
• Amin'ny toe-javatra manao ahoana no anaovana ny rafitra fiarovan-tenanao (na dia raisinao daholo aza ny fanampiana rehetra eto amin'izao tontolo izao tianao) raha toa ka mitebiteby amin'ny tsiranoka 20 ny gripa tranainy? Ny ampahany manan-danja amin'ny rafi-kery fanangonanao dia tsy maintsy miady amin'ny vokatry ny otrikaretina. Arovy ny tsinainao ary esory ny hery fiarovanao.
• Bakteria mahasoa (raha misy) dia miteraka tsiranoka matevina toy ny Mutation Factor sy Lactoferin mivantana ao anaty tsinay. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia mitandrema tsara ary hampivoatra ny hery fanefitrao amin'ny fampitomboana ny famokarana ao an-tsokosoko.
• Mampihena ny fiantraikan'ny CIC ny famokarana angovo fanenan-koditra, izay manamaivana ny alahelon'ny rafi-pandam-pahasalamana fanampiny.
• Ny fihinanana sakafo mety dia manatsara ny hery fanefitra. Ny cellule immune rehetra ao amin'ny vatana dia natao avy amin'ny sakafontsika. Ny fihinanana sakafo tsy fahampian-tsakafo dia midika hoe cellules immune misy fahasosoana. Ny fambolena vitaminina sy mineraly tsara dia mampitombo ny famokarana sela miaina ao amin'ny vatana.
• Omega-9 + Acid Fatty dia modulatoran'ny rafitra immune izay manampy amin'ny fitazonana ny rafitra fiarovana tsara araka ny tokony ho izy mba tsy hanafika ny tenany.
• Mihamaro ny antioxidants-ka manandratra ny hery fiarovana amin'ny lafiny maro. Tahaka ohatra ohatra, manaova curcumin. Amin'ny fanadihadiana ara-psikolojika, 1999, Vol. 28, 5-6 Publications, p. 291-303 dia namoaka fanadihadiana izay mampiseho fa mety hanova curcumin ny habetsahan'ny ra sela fotsy ho 50 12% tamin'ny andro fotsiny, tsy lazaina intsony ny nivezivezy 512 hery fiarovana ao amin'ny toerana iray ihany ny fotoana.
• Manadio ny aty amin'ny fomba fanadiovana sy fampiroboroboana mahomby dia manatsara ny fahaizana mamokatra ny hery fanefitra ary hanafoana ny bakteria avy amin'ny ra. Ny fanadiovana ny ra amin'ny fanadiovana ny ra ary ny fampitomboana ny pH-pH dia manampy amin'ny fanatsarana ny hery fiarovana.
• Ary mazava ho azy, ny fampiasana raokandro isan'andro potions fa noresahina tao amin'ity toko ity dia be kokoa ny hery fanefitra nidina ny tsipika, na dia nandritra ny fitsaboana simika-manafintohina.
Fihetseham-panoheram-bolo: Echinacea, Pau d'arco, Suma, Reishi, Maitake, Cordyceps
Ny taovam-pandevonan-dratsy: tongolo gasy, tongolo, ginger, siramamy manana zezika, ranomandry (akanjo mainty), vinaigera vinaingitra
• Ny fampiharana ara-tsaina sy ny fampisehoana araka izay voafaritra ao amin'ny toko manaraka dia afaka manatsara ny fiasan'ny hery fiarovana amin'ny antsasany mahery amin'ny ora 24. Ankoatra izany, ny fampiasana ny raokandro tonic ny selam-pitatitra dia afaka mampihena ny adin-tsaina be eo amin'ny tena, izay hiafara amin'ny mitombo ny hery fanefitra ny asa, saika ihany mandritra ny alina.
• Ary tadidio fa ny fototry ny fidirana amin'ny ankamaroan'ny aretina dia avy amin'ny maso, ny orona ary ny vavany amin'ny fifandraisana tanana. Ataovy ao an-tsaina fa ny tanana dia mety hampidi-doza noho ny fifandraisana amin'ny olon-kafa (tanana, ohatra) ary mifandray amin'ny zavatra toy ny doorknobs sy telephones. Manasa ny tananao mandritra ny andro (na amin'ny savony tsy tapaka) dia azo ampiasaina mba hamonjena ny rafitra immune.
• Ary farany, iray amin'ny tombontsoa lehibe amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena tsy tapaka dia rafitra fiarovana tsara indrindra.
Boavaly mainty voahosotra - 250mg - 200 kapisily - Allium sativum L.
2 vaovao avy amin'ny € 16,90
Vidio € 16,90
Capsules Gluthation mihena - Antioxidant 500 mg - Jarrow Formulas Brand
3 vaovao avy amin'ny € 52,49
Vidio € 60,40
GLUTATHION nihena ho 98% - Formula misy precursors + Vitamina C - Manamafy ny tsimatimanota, ...
Vidio € 26,90
GLUTATHION amin'ny fermentation BIO-voajanahary + CHARDON MARIE & NAC miaraka amin'i BIO Acerola | Immunity + Detox ...
Vidio € 27,90
L-glutathione 500mg - mihena - vegan - takelaka 120 an'ny L-glutathione
Vidio € 40,95
Pur Aloé - Aloe vera organika gel fisotro madio 1000ml
6 vaovao avy amin'ny € 16,90
Nohavaozina farany tamin'ny 28 Septambra 2021 6:34 maraina
Lahatsoratra hafa ao amin'ny sokajy
Andraikidra volom-borona sy tsangam-bato mba hanatsara ny fahasalamanao
Ny fo, mpamokatra herinaratra elektromagnetika mahery miaro antsika
Kinky tsy misy faneriterena
Maradona, un kid en or - Documentary (2006)
Ny fanalahidin'ny fandikana ny nofy araka ny nofinofy Ejiptiana